Sidee loo qiyaasaa qiimaha jawharad? Cusbooneysiin cusub 2021. Tilmaamo waaweyn
Sidee loo qiyaasaa qiimaha dhagaxa?
Aqoonsiga tayadaada dhagaxa
Aqoonsiga suuq galkaada
Dheeman marka laga reebo, ma jiro ilaha ansaxa ah ee qiimaha dhagxaanta adduunka. Wadamada qaar waxay isku dayayaan inay dejiyaan xeerar. Laakiin sharciyadani waxay ku ansaxayaan keliya mid kasta oo ka mid ah waddamadan. Dalalka adduunka intiisa badan, ma jiro xukun.
Qiimaha dhagaxu si fudud waa natiijada heshiiska u dhexeeya iibiyaha iyo iibsadaha. Dabcan, waxaa jira sharciyo aasaasi ah oo lagu qiimeeyo qiimaha dhagaxaanta, kuwaas oo lagu sharaxay hoos.
Ugu horreyn, waa in aad aqoonsatid dhagaxaaga, taas oo ah, waa maxay reerka dhagaxa? Waa maxay noocyada kala duwan ee dhagaxa? Miyuu dabiiciga ama dabiiciga ah?
Ka dib, haddii ay soo baxdo in dhagaxu dabiici yahay, su'aasha xigta waa: Miyaa la daweeyaa ama maahan?
Haddii dhagaxaaga la daaweeyo, su'aasha ku xigta waa: Waa maxay nooca daaweynta lagu sameeyay dhagaxa?
Kuwani marka hore Xuduudaha ayaa markaa noo oggolaan doonta inaan bilowno inaan qiyaasno tayada dhagaxa.
Sida caadiga ah nooca macluumaadka aad ka heli doonto dhammaan shahaadooyinka ay bixiso sheybaarka maraakiibta. Sababtoo ah kuwan waa macluumaad aadan adigu iskaa u aqoonsan karin haddii aadan ahayn khabiir ku takhasusay iyo haddii aadan haysan qalabka sheybaarka.
Laakiin tani kuma filna in la qiyaaso qiimaha dhagax.
Marka dhagxaan si cad loo aqoonsado, afar shuruudo dheeraad ah ayaa loo baahan yahay in la qeexo.
Midka koowaad waa midabka muraayadaha, tan labaadna waa caddaynta dhagaxa, saddexaad waa tayada jarida dhagaxa iyo afaraad waa miisaanka dhagaxa.
Afartan shuruudood ayaa si fiican looga yaqaan suuq geela, laakiin dad yar ayaa og in shuruucda la mid ah ay khuseeyaan dhammaan alaabada.
Markaad aqoonsatid dhagaxa, weli waxaa jira hal dhibic oo lagu aqoonsanayo: qiimaha dhagax ee suuqa, iyada oo ku xidhan halka aad ku taal juquraafi ahaan iyo sida aad ujoogto suuqa ganacsiga.
Dhab ahaantii, dhagax isku mid ah oo isku mid ah ayaa noqon doona mid qaali ah waddankeeda asalka ah haddii aad isbarbardhigto qiimaheeda waddanka ku yaala dhamaadka kale ee adduunka.
Ugu dambeyntiina, qiimaha dhagaxu sidoo kale wuu ka duwanaan doonaa iyada oo ku xidhan haddii aad ka iibsanayso dhagaxyo qaali ah jumlada ama suuqa iibka. Qiimuhu sidoo kale wuu ka duwanaan doonaa iyadoo ku xidhan hadduu dhagaxu mar hore ku dhegan yahay jawharad, iyo in kale.
Dhab ahaan, sida qeybaha kala duwan ee dhaqaalaha, dhexaadiyeyaasha intooda badan ee soo saaraha wax soo saaraha iyo macaamilka, qiimaha sicirka waa ka sarreeyaa.
Ma jiro wax dhaqso ah oo lagu saxo. Haddii aad rabto inaad qiyaasto qiimaha dhagax, waa inaad sameysaa daraasad suuq ah naftaada adoo u tagaya inaad la kulanto alaab-qeybiyeyaasha jawiga meesha aad joogto, sidaas darteed, markaad isbarbardhigto qiimahooda, waxaad yeelan doontaa fikrad qallafsan qiimaha jawharadyada ku habboon aaggan juquraafi ahaan, waqtigan saxda ah.
Waa shaqo joogto ah maxaa yeelay qiimaha si dhakhso leh ayuu isu beddeli karaa.
Haddii aad xiiseyneyso mowduucan, aad rabto inaad ka gudubto aragtida si aad u tababarto, waan bixinnaa koorsooyinka maraakiibta.